शहीद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगअन्तर्गत चौथो चरणको पहिलो खेलमा मच्छिन्द्र क्लब न्युरोड टिम (एनआरटी) लाई पराजित गर्दै लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लेको छ । सातदोबाटोस्थित अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) कम्प्लेक्सको खेलमैदानमा आज भएको...
शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको तेस्रो चरणका खेल सकिँदासम्म मनाङ मस्र्याङ्दी क्लब शीर्ष स्थानमा छ । तीन खेलमा शतप्रतिशत नतिजा निकाल्दै मनाङ नौ अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो । दुई खेलमा जीत र एक खेलमा बराबरी खेलेको थ्रीस्टार सात अ...
पिपीएल क्रिकेट : पोखरामाथि बुटवलको शानदार जित
दोस्रो संस्करणको नमस्ते पोखरा प्रिमियर लिग ९पिपीएल० टी–२० क्रिकेट प्रतियोगिताअन्तर्गत आजको पहिलो खेलमा बुटवल ब्लास्टर्सले अघिल्लो संस्करणको विजेता पोखरा पल्टनलाई आठ विकेटले पराजित गरेको छ । पोखरा रङ्गशालास्थित क्रिकेट मैदानमा...
गोरखामा फुटबल प्रशिक्षणका लागि कृत्रिम घाँसेमैदान निर्माण गरिने भएको छ । गोरखा नगरपालिका–९ दल भन्ञ्याङमा द ओसन क्बलले घाँसे मैदान निर्माण गर्न लागेको क्बलका अध्यक्ष अमित खत्रीले जानकारी दिनुभयो । “क्बलले आफ्नै सक्रियतामा ...
थ्रीस्टार र जाउलाखेल बराबरीमा
शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगितामा थ्रीस्टार क्लब र जावलाखेल युथ क्लबबीचको खेल गोलरहित बराबरीमा टुङ्गिएको छ । सातदोबाटोस्थित एन्फा (अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ) कम्प्लेक्सको खेल मैदानमा आज भएको खेलमा निर्धारित समयसम्म दुवै टो...
पिपिएल क्रिकेटमा चितवनको जीत
पोखरमा जारी पोखरा प्रिमियर लिग (पिपिएल) टी ट्वान्टी क्रिकेट प्रतियोगितामा चितवन राइनोजले साविक विजेता पोखरा पल्टनलाई पराजीत गर्दै विजयी शुरुआत गरेको छ । पोखरा रङ्गशालामा आज भएको आफ्नो पहिलो खेलमा चितवनले पोखरा पल्टनलाई...
भारत भ्रमणका लागि अस्ट्रेलिया टिमको घाेषणा, लाबुशेन बन्न सक्छन् हिरो
क्रिकेट अस्ट्रेलियाले आउने महिनामा भारत बिरूद्धकाे एकदिवसीय श्रृंखलाका लागि एकदिवसीय टोलीको घोषणा गरेको छ । १४ सदस्यीय एकदिवसीय टोलीमा, मार्नस लाबुसचेन पहिलो पटक छनोट भएका छन् । २५ बर्षे ल्याबुसन आजकाल एकदम राम्राे फर्ममा छन् । ...
ओजिल विवाद : चीनको सीसीटीभीले आर्सनल क्लबको खेल प्रसारण गरेन
चीनको सरकारी प्रसारणकर्ता सीसीटीभीले आइतवार भएको आर्सनल-म्यान्चेस्टर सिटीको खेललाई प्रसारण तालिकाबाट हटाइदिएको छ । आर्सनलका मिडफील्डरले चीनमा उइगर मुस्लिम समुदायप्रति गरिने व्यवहारबारे सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरेका थिए । लगत्तै ...
पोखरामा आइतबारदेखि शुरु हुने दोस्रो संस्करणको पोखरा प्रिमियर लिग (पिपिएल) टी–२० क्रिकेट प्रतियोगिताको उद्घाटन खेल साबिक विजेता पोखरा पल्टन र काठमाडौँ गोल्डेन्सबीच हुने भएको छ । आजदेखि प्रतियोगिता शुभारम्भ गर्ने कार्यक्रम र...
१३ औँ दक्षिण एशियाली खेलकुदको समापनमा आकाशमा जब १५० ड्रोनको प्रस्तुति गरियो, धेरै नेपाली चकित भए! किनभने यस्तो किसिमको प्रस्तुति नेपालको लागि नौलो हो। चिनिँया प्रविधि मार्फत गरिएको उक्त प्रस्तुतिमा नेपालको मौलिकता झल्किने विभिन्...
शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगितालाई कतार एयरवेजले मुख्य प्रायोजन गर्नेभएको छ । अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा)का अनुसार कतार एयरवेजले एन्फालाई प्रायोजनस्वरुप रु एक करोड ७० लाख उपलब्ध गराउनेछ । कतार एयरवेजले एन्फालाई दु...
काठमाडौं । १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) अन्तर्गत मङ्गगलबार दशरथ रङ्गशालामा भएको पुरुष फुटबलको उपाधि नेपालले जितेको छ । फाइनल प्रतिस्पर्धामा भुटानलाई हराएर नेपालले स्वर्ण जितेको हो । नेपालका लागि खेलको १६ औं म...
नेपाल २–१ को अग्रतामा (लाइभ भिडियाे )
काठमाडौं । १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद ‘साग’अन्तर्गत फुटबलको फाइनलमा नेपालका ५३ औं मिनेटमा सुनिल बलले गोल हानेका छन् । खेलको ३७ औं मिनेटमा नेपालविरुद्ध भुटानका चेन्चो ग्याल्चेनले बराबर...
काठमाडाैं । नेपालमा जारी १३ औं सागको फुटबलकाे फाइनलमा नेपालले उत्कृष्ट सुरुवात गरेको छ । नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले अज भुटानमाथि १–० को अग्रता कायम गरेकाे छ । सुरुदेखि नै नेपाल भुटानमाथि हाबी भ...
काठमाडौं । १३ औं सागको फुटबलको फाइनलमा आज नेपाल र भुटानबीचको खेल हुँदै छ । जसका कारण नेपाली दर्शकहरु फुटबल हेर्नका लागि रंगशाला प्रवेश गर्न आतुर छन् । टिकट नपाएको भन्दै दर्शकले रंगशालाबाहिर प्रदर्शन गरेपछि प्रहरीले लात्त...
काठमाडौं । १३ औं दक्षिण एशियाली खेलकुद प्रतियोगिता भव्यतापुर्वक सम्पन्न भएको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रि केपी शर्मा ओलीले विशेष सम्बोधन गर्नुहुने भएको छ । सोमबार साँझ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश शिलवालले पत्रकार सम्मेल...
फुटबल हेर्न रंगशाला पुगेका दर्शक र पत्रकारमाथि प्रहरीकाे लाठी चार्ज
काठमाडौँ । त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा फुटबल हेर्न गएका दर्शकमाथि प्रहरीले लाठी बर्साएको छ। आज १३ औँ सागको समापनसँगै पुरुष फुटबलको फाइनल खेल पनि हुँदैछ । फाइनल खेलका लागि नेपाल र भुटान भिड्दैछन्। खेल हेर्नका लागि ...
रुस खेलकुद प्रतिस्पर्धाबाट चार वर्षको लागि प्रतिबन्धित
रुसलाई आगामी चार वर्षका लागि सबैजसो ठूला खेलकुद प्रतियोगिताहरू खेल्नबाट प्रतिबन्ध लागेको छ। वर्ल्ड एन्टी-डोपिङ एजेन्सी, वाडा, को यो प्रतिबन्धपछि रुसले सन् २०२० को टोक्यो ओलिम्पिक्स र सन् २०२२ को फुटबल विश्वकपमा भाग लिन पाउने छैन। त...
आज स्वर्ण पदकका लागि प्रतिस्पर्धा ,नेपाल र भुटानमध्ये को बलियो ?
गत १० दिनदेखि काठमाण्डाैँमा जारी १३औँ दक्षिण एशियाली खेलकुद प्रतियोगिता सागमा नेपाल र भुटानले फुटबलमा गरेको प्रदर्शनमा केही भिन्नता रह्यो। नेपालले पहिलो खेलमै भुटानलाई ४-० ले हराएको थियो । त्यसपछिका खेलमा नेपालले हार्न त कु...
आज १३ औँ सागको अन्तिम दिन , ५ खेल हुँदै
काठमाडौँ । आज १३ औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को भव्य समारोहका साथ समापन हुँदैछ। खेल तालिका अनुसार आज ५ खेलमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। समापन अघि पुरुष फुटबल, बक्सिङ, बास्केटबल, जुडो र स्क्वास खेलको प्रतिस्पर्धा हुनेछ। सबै खेल का...